MelodyMon: April 2008
Hi friends!! Some of my friends said that they can't see the words in my blog. There may be some problem. I have already installed Zawgyi One font and I can see the words in my blog well. I don't know how to fix it. So, please tell me whether you can see the words well or not. Ku Nyi Par Naw! Thank you so much.
Posted by MelodyMon at 12:43 AM No comments:
ညီမလေးတစ်ယောက်က သံစဉ့်ဘလော့က စာတွေကောင်းကောင်းဖတ်လို့မရဘူးတဲ့။ တခြားလူတွေရောဖတ်လို့ရမရသိချင်လို့ပြောပြကြပါဦး။
ဖတ်လို့မရရင် ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာပါ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါနော်။
ဥပမာ - ( လေးထောင့်တုံးတွေဖြစ်နေတယ်) တို့ လိုမျိုးပေါ့။
ဒီနေ့တော့ တော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီ။ အိပ်တော့မယ်။ Haveasweet dream.......ZZZZZZzzzzzzzzzzzzz
Posted by MelodyMon at 12:28 AM 1 comment:
F4 Meteor Rain 流星雨
Posted by MelodyMon at 12:23 AM No comments:
ဒီအပါတ်တော့ မြန်မာသီချင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့ ဂျပန်ရိုးရာနာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ထားတယ်။ သီချင်းတွေက ဒိုးလုံးရဲ. မချစ်ဘူးမပြောပါနဲ့ ရယ်၊ ထူးအိမ်သင်ရဲ. ရာဇ၀င်များရဲ.နတ်သမီး ။ ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ ကိုငယ်က တစ်ယောက်တည်း မမောတမ်း မပမ်းတမ်း အသက်ဝင်အောင်ပြောပြထားလေရဲ. ။ နားထောင်ကြည့်ပါဦး။
NHK Radio Japan - April လ ၂၅ ရက် စနေနေ့
Posted by MelodyMon at 12:19 AM No comments:
ဒီနေ့ Report လုပ်ဖို့ရုံးကလူတွေနဲ့တိုကျိုသင်္ကြန်ပွဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။ တော်တော်လေးစည်ပါတယ်။ ကဲကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ သောက်ကြ၊ ဆိုကြ၊ တီးကြ၊ ကကြ နဲ့ပေါ့။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
Posted by MelodyMon at 12:10 AM 1 comment:
ဒီနေ့လည်းကျောင်းအသွားမှာမိုးရွာတယ်။ မိုးဖွဲလေးဆိုတော့ အိမ်ကနေဘူတာကိုစက်ဘီးနဲ့ဘဲသွားလိုက်တယ်။ မိုးသဲရင်တော့ စက်ဘီးမစီးဘဲလမ်းလျှောက်တယ်လေ။ ကျောင်းရောက်တော့မိုးကတိတ်သွားရော။ အပြန်ကျတော့တစ်ခါမိုးကရွာပြန်ရော။ တမင်များချိန်ပြီးရွာသလားအောင့်မေ့ရတယ်။ ဘယ်ရမလဲ။ မိုးကရွာတော့ မိုးရေချိုးပစ်လိုက်တာပေါ့။ စက်ဘီးရှေ.ခြင်းထဲကို ကွန်ပြူပါတဲ့အိတ်ကိုထည့်၊ အနွေးထည်ကိုချွတ်၊ အိတ်ကိုလုံအောင်အုပ်ပြီး မိုးရေထဲစက်ဘီးစီးပစ်လိုက်တယ်။ မိုးရေထဲမှာစက်ဘီးမစီးဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပျော်သွားတယ်။ တကယ်ဆိုသီချင်းတောင်အော်ဆိုလိုက်ချင်တာ။ အရူးဆိုပြီးလာဖမ်းမှာကြောက်လို့။ (^^) အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရွှဲရွှဲစိုနေတာဘဲ။ အိတ်ကတော့ အနွေးထည်လေးရဲ. ကျေးဇူးကြောင့်မိုးရေထိတယ်ဆိုရုံဘဲ။
ဒီနေ့လည်းပင်ပန်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့်မအိပ်ချင်သေးဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းပေမယ့်စိတ်က မအိပ်ချင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် မအိပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ မနက်ဖြန်လည်း မနက်အတန်းရှိတယ်။ ညကျရင်လည်း ရုံးမှာနှုတ်ဆက်ပွဲရှိလို့ သွားရဦးမယ်။ သြော် - တော်တော်တောင်ညဉ့်နက်နေပြီဘဲ။ အိပ်မှ အိပ်မှ။
အားလုံးဘဲ - အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ။
Posted by MelodyMon at 11:04 PM No comments:
လိုက်ဆိုချင်တဲ့သီချင်းရှိရင် သံစဉ့်ကိုပြောပြရင် Romaji လို့ခေါ်တဲ့ Alphabet နဲ့စာသားရေးပေးမယ်။
Posted by MelodyMon at 10:15 PM No comments:
Amuro Namie ရဲ. Can You Celebrate
Posted by MelodyMon at 10:06 PM No comments:
အဲလက်ခ်စ် ပြန်ဆိုထားတဲ့ ( သီချင်းချစ်သူ ) ရဲ. original က ဒီသီချင်းလေ။ ကြားဖူးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။
Tokunaga Hideaki ရဲ. Saigono Iiwake (နောက်ဆုံးအကြောင်းပြချက်)
Posted by MelodyMon at 9:59 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:04 AM No comments:
ဟူး . . . ပင်ပန်းလိုက်တာ။ ခုနမှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ အလုပ်ပြီးတာနောက်ကျလို့။ မနက်ကျရင်ကျောင်းသွားရဦးမယ်။ ညစာလည်း မစားရသေးဘူး။ သွားစားလိုက်ဦးမယ်။ ဒီရက်ပိုင်း သူများဘလော့တွေကိုပဲလည်လည်သွားနေတာနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့မှာဘာမှတောင်သိပ်မရေးဖြစ်ဘူး။ (^^)ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့စိတ်ကူးနဲ့တင်ပြီးပြီးသွားတယ်။ ကဲ - မန်မန်သွားစားလိုက်ဦးမယ်။ ပြီးရင်တော့ အိပ်မှဖြစ်တော့မယ်။
အိုယာစုမိ ～　(-.-)ZZZZzzzzzzz.....
Posted by MelodyMon at 1:06 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 10:36 PM No comments:
April လ 19 ရက် စနေနေ့အစီအစဉ်
Posted by MelodyMon at 9:27 PM No comments:
အခုတော့ အဲဒိလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ (^_^) နောက်လည်းလာလည်ကြနော်။ လာရင်ခြေရာလေးတွေချန်သွားလေ။ သံစဉ်လည်းပြန်လာလည်မယ်။
ခြေရာလေးချန်သွားပါဆိုလို့ ဂျပန်စကားလေးတစ်ခုပြောပြချင်လာတယ်။ (ကပ်တယ်) ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာ မြန်မာလို (ဖတ်ကနဲကပ်တယ်) လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်။ ဂျပန်လိုကျတော့ (ဖတ်) ဆိုတာကို (ペタ) --- ပယ်တ --- လို့ပြောတယ်။ မြန်မာလိုစာလုံးပေါင်းရေးတော့ ပယ်တ လို့ဖြစ်သွားပေမယ့် ဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါတော့ အသံထွက်လေးကချစ်ဖုိ့ကောင်းတယ်သိလား။ ဂျပန်ဘလော့ဂ်တွေမှာ (လာလည်သွားတယ်နော်) ဆိုရင် အတိုလေး (ပယ်တ ペタ)　ဆိုပြီးရေးတတ်ကြတယ်။ ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာမှာ ခြေရာလေးဖတ်ကနဲကပ်သွားတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ သံစဉ့်ဘလော့ဂ်ကိုလာလည်သွားရင် ခြေရာလေးတွေ(ပယ်တ ペタ)　ဆိုပြီးကပ်သွားနော်။
Posted by MelodyMon at 8:55 PM No comments:
c box ရဲ. width ကို ကျယ်လိုက်တာ အောက်ကနာမည်တို့ အီးမေးလ် တို့ရေးတဲ့နေရာကျတော့မကျယ်သွားဘူး။ ဘာလို့လဲဟင်။ ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ (ToT) ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာသိရင်ပြောပြပါနော်။
Posted by MelodyMon at 6:28 PM4comments:
Posted by MelodyMon at 2:52 AM No comments:
Blog ကို Edit လုပ်နေတာနဲ့စာလည်းမကျက်ဖြစ်ဘူး။ ၃နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်။ ဒုက္ခပါပဲ။ မနက်ဖြန်အစောကြီးထရဦးမယ်။ မြန်မြန်အိပ်မှ။ ဟာ . . . အရေးထဲဗိုက်ကလည်းဆာလာပြန်ပြီ။ တခုခုစားပြီးမြန်မြန်အိပ်မှ။ မနက်ဖြန်က ဆရာစကားပြောတာကိုထိုင်နားထောင်ရမယ့်အတန်းတွေချည်းပဲ။ ငိုက်မှာတော့မြင်ယောင်သေး။ ဟီး. . . (^_^;) အိပ်တော့မယ်။ အိပ်မက်လှလှလေးတွေမက်ကြပါစေ။
お前が　‘‘　死にたい　’’　と言って
無駄に過ごした　『今日』　は
一所懸命生きたかった　『明日』　なんだ！
Posted by MelodyMon at 11:20 PM No comments:
↑ & ↓ငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့တူသေးလား။ :P
Posted by MelodyMon at 11:15 PM 1 comment:
အချိန်တွေကကုန်တာမြန်လိုက်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကကလေးဘ၀ကိုပြန်လိုချင်တယ်။ ဒီလိုတွေးမိတော့ ဦးစိုင်းထီးဆိုင်ရဲ. သီချင်းလေးကိုသွားသတိရတယ်။
ဘာလို့လူတွေချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကအသေစောပြီး လူတွေမုန်းကြတဲ့သူကျတော့ အသက်ရှည်တာလည်းမသိဘူးနော်။ အင်းပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သတိမထားလိုက်ဘဲ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားကြရမှာ။
အဖိုးကြီး အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ နေရမယ်၊ မနေရဘူးဆိုတာဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူး။ သောတရှင်အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းက ခေါင်းထဲကကို မထွက်ဘူး။
သူကပြောတယ်။ ( နေစဉ်မှာ ကုသိုလ်လုပ်ပါ ) တဲ့။ နေ့စဉ် လို့ မပြောဘူး။ နေစဉ်တဲ့။
မနက်ဖြန်လည်း ကျောင်းသွား၊ ပြန်လာ၊ အလုပ်လုပ်၊ စား၊ အိပ်၊ ထုံးစံအတိုင်း
ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးမှာ ၊ တနေ့တနေ့လုပ်ဖြစ်တဲ့
ကုသိုလ်ရဲ.ပမာဏနဲ့ အကုသိုလ်ရဲ.ပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် (ကုသိုလ်ရဲ.ပမာဏကပိုများပါတယ်) ဆိုတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိလဲ။
သံစဉ်ကတော့ ကုသိုလ်ထက် အကုသိုလ်ပိုများတယ်လို့ထင်တယ်။
( ဟိုဟာလုပ်ရဦးမယ်။ ဟိုကိုသွားရဦးမယ်။ ဟိုဟာလေးဝယ်ရဦးမယ်။ ဟိုလူကိုသဘောမကျဘူး။ ဒီလူကိုတော့သဘောကျတယ်။ )ဒီလိုဒီလို ဒေါသတွေ၊ လောဘတွေ၊ စိတ်ပျံ.လွင့်တဲ့ ထိနမိတ္တ္တ တွေ နဲ့ ကိုယ်တိုင်နားမလည်၊ သတိမထားမိတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေလိုက်တာ ဖြစ်နေလိုက်တာ။ ကြောက်စရာ ။
ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာ ၂၄ နာရီထဲမှာ ဘယ်နှစ်နာရီ၊ (သို့) ဘယ်နှစ်မိနစ်များရှိလဲ လို့ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်မှမရှိဘူး။ နောင်ဘ၀အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးနော်။
ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိလေးရှိနေပြီး သတိရတိုင်းရတိုင်း ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်အောင်နေမယ်
ဆိုရင်တော့ သတိလက်လွတ်နေတာထက်အကျိုးရှိမှာပါ။ အများကြီးကြိုးစားရဦးမယ်။
ကဲ - ဘုရားရှိခိုးပြီးအိပ်တော့မယ်။ အိပ်မက်လှလှမက်ကြပါစေ။
Posted by MelodyMon at 10:46 PM 1 comment:
ဦးဇော်ဝမ်းဆိုထားတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး၊ သောတရှင်တွေရဲ.စာတွေကိုပြန်ထားတယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်နားထောင်သွားပါဦး။ (^_^)
Posted by MelodyMon at 3:51 PM No comments:
Presents4me
Posted by MelodyMon at 8:39 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 8:27 PM4comments:
ရေးစရာထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူတွေများလာလည်သွားလဲလို့ကောင်တာထဲမှာဝင်ကြည့်တော့first time visitorတွေတော်တော်များများလာသွားတာတွေ့ရတယ်။ ၀မ်းသာစရာပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာက ဘာမှရေးထားတာမတွေ့ရဘူး။　｡･ﾟﾟ･(>_<;)･ﾟﾟ･｡ အင်းပေါ့လေ။　ရေးချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ပို့စ်မှမရှိတာ။ (^^;)　ဖတ်တဲ့လူမရှိလည်း ရေးမှာဘဲ။ ရေးမှာဘဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။
ဆိုတဲ့ နိုးရဲ.ချစ်မှာဘဲ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပေါ့။ ကိုယ့်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တဲ့သူကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော်တော့်ကိုပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ဘဲနော်။
ဟာ ! ၁၀နာရီခွဲကျော်သွားပြီ။ မနက်ဖြန်အတန်းတက်ရမှာစောတယ်။ ဘလော့ကိုဒီမှာတင်ရပ်ထားပြီးလုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်မှ။
Posted by MelodyMon at 10:44 PM3comments:
စာအုပ်ကြည့်ပြီး Photoshop နဲ့လုပ်ကြည့်တာ။ မဆိုးဘူး။ လှသားဘဲ။ ဟီးဟီး
Posted by MelodyMon at 10:44 PM4comments:
Posted by MelodyMon at 2:36 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 2:17 AM No comments:
( အလွမ်းမိုးစက်များ - အဲလက်ခ်စ် )
( မိုးလေးရေ )ဆိုတဲ့ခေါ်ပုံလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
( ချစ်သေးလား - အဲလက်ခ်စ် )
ဟုတ်တယ်နော်။ အကြင်နာတွေသိပ်ပေးလွန်းရင်လူတွေကရိုးသွားတတ်တယ်။ သိပ်ချစ်ပြလွန်းရင်လည်း ပေါ့ပေါ့လေးတွေးတတ်ကြတယ်။ဝေးသွားတော့မှ၊ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မှ တန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်။ခက်ပါတယ် . . .
( ကလေးရယ် - အဲလက်ခ်စ် )
( ကလေး ) ဆိုတဲ့　ခေါ်ပုံလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုနားထောင်တိုင်းဟိုးအတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ လွမ်းမိတယ်။
( လွမ်းရက်တွေအကြောင်း - အဲလက်ခ်စ် )
အရင်တုန်းက ကိုအဲလက်ခ်စ် ရဲ.ဆိုပုံကိုပိုကြိုက်တယ်။ အသံဆွဲတဲ့နေရာမှာVibrationသိပ်မထည့်ထားဘူး။အခုပြန်ဆိုထားတဲ့ဟာမှာVibrationတွေတအားထည့်ထားတယ်။ရိုးရိုးလေးဆိုတာပိုကြိုက်တယ်။
Posted by MelodyMon at 1:40 AM No comments:
Labels: Diary, My Favorites
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ဒီနေ့မှပဲရေးဖြစ်တော့တယ်။ တက်စရာအတန်းတွေကအများကြီးပဲ။ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ သံစဉ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းစာသားလေးတစ်ချို့ ကိုရေးမိတယ်။ မြန်မာသီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်မြန်မာပြည်ကိုအရမ်းလွမ်းတာပဲ။ တခြားဘာသာနဲ့ဆိုတဲ့သီချင်းတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း၊ ကိုယ့်ရဲ.မိခင်ဘာသာစကားလောက်တော့ ရင်ထဲကိုမထိဘူး။ စာသားတွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်မြောက်နေပါစေဦး။ မြန်မာသီချင်းလောက် ရင်မခုန်ဘူး။
လွမ်းတယ် . . .
Posted by MelodyMon at 1:19 AM No comments:
Min Yae. Nout Ka by Alex
------ ( မင်းရဲ.နောက်က - အဲလက်ခ်စ် ) ------
ဒီအပိုဒ်လေးထဲမှာပါတဲ့ (ညီမလေးခွင့်လွှတ်ပါ) ဆိုတဲ့စကားလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ ညီမလေး လို့ခေါ်တာလေးကိုသဘောကျမိလို့။
Posted by MelodyMon at 1:16 AM No comments:
ဧပြီလ၅ရက်နေ့က လွှင့်သွားတဲ့ တေးဂီတအစီအစဉ်လေးနားထောင်လို့ရပြီ။ ဒီအပါတ်ကစပြီးမြန်မာသီချင်းလေးတွေနဲ့အတူ သောတရှင်တွေရဲ. ပေးစာတွေကိုပြန်ကြားထားတဲ့ကဏ္ဍအသစ်လေးစပြီလေ။ နားထောင်ကြည့်ပါဦး။
Apr.5 ရဲ. ဘေးက ( ချက်ချင်းနားဆင်လိုပါက) ဆိုတဲ့နေရာကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင်နားထောင်လို့ရပြီ။ ဝေဖန်၊ အကြံပေးချက်လေးတွေကိုကြိုဆိုနေပါတယ်။
Posted by MelodyMon at 12:57 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:41 AM No comments:
ဒီသီချင်းလေးက ဒီလတေးဂီတအစီအစဉ်ရဲ. စာမေးပွဲမှာမေးမယ့်သီချင်းလေးပေါ့။ ဘာသာပြန်ထားတာရိုက်ပြီးသွားမှပဲတင်တော့မယ်။
Posted by MelodyMon at 2:26 PM 1 comment:
လေတစ်ချက်တစ်ချက်ဝှေ့လိုက်တိုင်း ပန်းနုရောင်နဲ့အဖြူရောင်သန်းနေတဲ့ ချယ်ရီပွင့်ဖတ်လေးတွေက ပင်ယံထက်ကနေ လေညှင်းနဲ့အတူဝဲပျံကျဆင်းလာတယ်။ ဖြာကျနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ.အောက်မှာတလှပ်လှပ်နဲ့ပျံဝဲနေတဲ့ ပွင့်ဖတ်လွှာလေးတွေကိုငေးကြည့်ပြီးနွေဦးရဲ.အလှအပကိုခံစားရင်း ရင်ထဲကမွန်းကျပ်မှုတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတဒင်္ဂမေ့လျော့သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာလိုက်ပါဘူး။
( အိုဟားယိုး . . . )
ချိန်းထားတဲ့သူငယ်ချင်းရောက်လာတယ်။ ဒီနေ့ကျန်းမာရေးစစ်ရမယ်လေ။ မိန်းကလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေးသက်သက်စီခွဲထားတာဆိုတော့ တစ်ခန်းလုံးမိန်းကလေးတွေချည်းပဲ။ ကွိကျိကွကျိနဲ့ စကားတွေပြောနေလိုက်ကြတာ ပွက်လောကိုရိုက်လို့။ မိန်းကလေးကျောင်းကိုပြန်ရောက်သွားရသလိုပဲ။ လသာ၂တုန်းကအကြောင်းတွေပြန်သတိရမိတယ်။
ကျန်းမာရေးစစ်ပြီးသွားတော့၊သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူ၊တက်မယ့်အတန်းတွေကိုရွေးကြတယ်။ သူတို့ကမေဂျာမတူတော့ အတူတူသာထိုင်ရွေးကြတာ။ တက်မယ့်အတန်းတွေကတခြားစီ။ စကားတပြောပြောနဲ့ရွေးနေလိုက်တာအချိန်
၃နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။ အမှန်ကဒီနေ့ကျောင်းပြီးတာနဲ့အလုပ်ကိုသွားရမှာ။ ဒါပေမယ့်ပြီးတာအရမ်းနောက်ကျသွားတော့အလုပ်မမှီလို့ဖုန်းဆက်ပြီးခွင့်ယူလိုက်ရ
တယ်။ ဒီအလုပ်ကအလုပ်ပျက်တာတို့၊ နောက်ကျတာတို့ဆိုဆူတာပြောတာတော့သိပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လခလျှော့ပစ်တတ်တယ်။ နားတော့အေးပါတယ်။ ၀င်ငွေတော့ လျော့တာပေါ့။ အတန်းတွေစပြီဆိုရင်အလုပ်ချိန်မှီအောင်မနည်းသွားရမယ်။ အိမ်ကနေအလုပ်အထိကနာရီဝက်လောက်ဆိုရောက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းကနေအလုပ်ထိဆိုရထားပြောင်းစီးရတာနဲ့ဆိုရင် ၂နာရီလောက်ကြာတာ။ ဘတ်စကားတစ်တန်၊ ရထားတစ်တန်၊ ကုန်းကြောင်းတစ်တန် နဲ့ အချိန်အရမ်းပုပ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ လုပ်ချင်တာကိုး။ ဒီနေ့လည်းလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဆေးခန်းသွားပြီးတာနဲ့အိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြေးရမယ်။ အချိန်မရှိတဲ့ကြားက Net Cafe လာပြီးရေးနေတာ။ တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ အင်တာနက်သုံးလို့ပြန်ရပြီးဆိုတော့ လာစရာမလိုတော့ဘူး။ ကဲ - အချိန်မရှိတော့ဘူး။ မြန်မြန်ပြန်မှ ။
Uh Oh!! ဆေးခန်းမမှီတော့ဘူး။ သွားပြန်ပြီတစ်ရက်။ မထူးပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်တော့မယ်။ Oops!!! မဖြစ်ဘူး။ မဖြစ်ဘူး။ တနင်္ဂနွေနေ့ကပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရဦးမယ်။ မနက်ဖြန်လည်းအားတာမဟုတ်ဘူး။ ဖူး . . .
ကဲ - ပြန်မှပါပဲ . . .
Posted by MelodyMon at 7:30 PM 1 comment:
ဒီနေ့ကျောင်းသွားရတယ်။ ပထမရက်ကမောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲလေ။ ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယမြောက်နေ့ပေါ့။ တတိယနှစ်ကစပြီး ကိုယ်တက်မယ့် seminar အတွက်ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ field နဲ့ ဆရာကိုရွေးရတယ်။ သံစဉ်ကCollegeအောင်ပြီး ဒီတက္ကသိုလ်ကိုတတိယနှစ်ကနေဖြတ်တက်တာဆိုတော့ဘယ်ဆရာကိုရွေးရမှန်းမသိဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ရုံးခန်းကဆရာနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့ အဲဒိဆရာကရွေးပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရွေးပေးတဲ့ဆရာကကျောင်းသားတွေကိုမတရားခိုင်းတယ်တဲ့။ နည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ သည်းခံနိုင်လားတဲ့။ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ နောက်ဆရာတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။ သူ့အချိန်ဆိုရင် self study လုပ်ခိုင်းတာများတယ်။ သိပ်ပြီးသင်ပေးပြပေးတာမရှိဘူးတဲ့။ အဲဒိလိုကြီးကျပြန်တော့လည်းမကောင်းဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာရဲ. class ကိုဘဲရွေးလိုက်တယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင်ကျောင်းမှာကျန်းမာရေးသွားစစ်ရဦးမယ်။ ပြီးတာနဲ့အလုပ်ကိုတန်းပြေးရမှာ။ ဖူး . . . မလွယ်ပါလား။ မနက်ဖြန်အလုပ်မှာနောက်အပါတ်ကစပြီး ဘယ်နေ့တွေ၊ ဘယ်နှစ်နာရီကနေ ဘယ်နှစ်နာရီအထိ အလုပ်ဆင်းနိုင်လဲဆိုတာပြောရမှာ။ အဲဒိအတွက် ဒီညကတည်းကအချိန်ဇယားကိုသေချာဆွဲပြီး ကျောင်းကဘယ်အချိန်ပြီးမလဲ။ အလုပ်ဘယ်အချိန်ဆင်းနိုင်မလဲဆိုတာကြိုစဉ်းစားထားရမယ်။ အရင်ဆုံးဘာsubject တွေယူမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရဦးမယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာကိုတော့ တရုတ်စာယူမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ ပေးယူမယူတော့မသိသေးဘူး။ တတိယနှစ်ကနေဖြတ်တက်တာဆိုတော့ သံစဉ့်အရည်အချင်းနဲ့လိုက်နိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။ တ၀က်ကနေဖြတ်တက်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ လုပ်စရာတွေလည်းအများကြီး။ စာကလည်း ခက်ဦးမှာ။ credit တွေပြည့်အောင်ယူဖို့တက်ရမယ့်အတန်းတွေကလည်း တပုံကြီး။ ကျောင်းလခကလည်းဈေးကကြီးဆိုတော့ အလုပ်ကလည်းလုပ်ရဦးမယ်။ သြော် - လူလုပ်ရတာမလွယ်ပါလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ဘော်ကျော့လေးနေရတဲ့ဘ၀ကိုလွမ်းမိတယ်။ ကဲ ကဲ - ဒါတွေပြောနေလို့မပြီးဘူး။ လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ရဦးမယ်။ ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲ။ ကျောင်းကိစ္စတွေပြီးရင် နောက်တစ်ပါတ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်အတွက် သောတရှင်တွေရဲ. စာတွေကို ရွေးရဦးမယ်။ OHHH....BZ BZ BZ BZ BZ BZ!!! BZ တယ်ဆိုပြီး ဘလော့ဂ်ရေးနေသေးတယ်။ ဟီး . . . ရောဂါကမသေးဘူး။ ကဲ - ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲ။ တကယ်တော်ပြီ။
Posted by MelodyMon at 7:39 PM2comments:
Posted by MelodyMon at 6:14 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 6:13 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 6:12 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 6:04 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 5:54 PM No comments:
Lifetime Respect by RSP
Posted by MelodyMon at 5:34 PM No comments:
နောက်ပြီး၊သီချင်းစာသားလေးတွေကို ဂျပန်စာခန်းဂျီး၊ Hiragana , Romaji ၊ မြန်မာလိုအသံထွက်၊မြန်မာလိုအဓိပါယ်တွေပါတဲ့စာစောင်လေးတွေလုပ်ပြီးလတိုင်း
ပေါထားတာလေးတွေကြုံရင်နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ နားထောင်ပြီးရင်အကြံလေးတွေလည်းပေး၊ ပေါနည်းလေးတွေလည်းသင်ပေးပေါ့။ (^_^)
ဂျပန်သီချင်းလေးတွေကိုတော့ YouTube ကနေနားထောင်လို့ရအောင် link တင်ထားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာသားတွေလည်းအချိန်ရတိုင်းတင်သွားမယ်။ခုမှဘလော့ဂ်စရေးခါစ ဆိုတော့ဘာမှကိုမတင်ရသေးဘူး။ Knowledge ကလည်းမပြည့်စုံတော့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။ သံစဉ့်ဘလော့ဂ်ကိုလာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြုံရင် comment လေးတွေလည်း cbox မှာချန်သွားနော်။ လာလည်မယ်လေ။
အစီအစဉ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ - - -
မျက်မှောက်ရေးရာ နဲ့ ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်
Posted by MelodyMon at 3:43 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 3:36 PM No comments: